SHONA TRANSLATION | friendship-bench
Chii chinonzi BENJI REHUSHAMWARI?
Benji rehushamwari rubatsiro rwakavambwa kuti rideredze uhwandu hwematambudziko ekufungisisa pakati pevanhu vanoda rubatsiro kubva kumakiriniki. Rubatsiro rwepa benji rehushamwari rwunopihwa navana mbuya hutano avo vakawana dzidzo yekubatsirana nevanhu kuti vagone kugadzirisa matambudziko avo kuburikidza nehurukuro mumakiriniki ari muHarare, Chitungwiza neGweru.
Friendship Bench session
Chii chinonzi KUFUNGISISA?
Kufungisisa chirwere chekudzamisa pfungwa zvakanyaya uye nemamwe matauriro chinodudzira kushungurudzika muhana zvakanyanya nekushungurudzika mupfungwa zvakanyanya. Dambudziko iri rinoshungurudza vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki uye vazhinji vanenge vasingazvizivi kuti vane dambudziko iri. Dambudziko iri rikasaonekwa nekukurumidza munhu anaro anogona kupihwa rubatsiro rusinakukwana uye zvimwe zvirwere zveupenyu zvakafanana neBP, Shunga kana HIV zvinogona kuwedzera nokuda kwedambudziko rekufungisisa.
Zvimwe zvezvinoratidza kuti munhu angangova nekufungisisa zvinosanganisira kurwara nemusoro,kushaya hanya nezvinhu zvawaimbofarira kuita, hasha zvenhando, kurarisa kana kurara zvishoma. Munhu akanetseka nezvinhu izvi kwemavhiki anodarika maviri anogona kunzi anechirwere chekufungisisa.